Ny amin’ny Chat roulette ny ankizivavy — dia «vehivavy ny karajia»
Rehefa teo ny raharaha, ka Dia ireo fotsiny nandeha teny an-dalana, dia nahita tsara tarehy vahiny, nijanona, nitsiky izy ary nanao ny karazan ‘Salama’. Izahay ankehitriny noho izany dia tsy ekena. Ary eto dia manana «vehivavy chat» ka ny zavatra rehetra. Ho antsika isan’andro, dia mahazo vitsivitsy arivo tsara tarehy, mahaliana sy mety hampahasosotra olon-tsy fantatra.
sy marina tsy tapaka ara-dalàna ny ankizivavy. Tonga ny fotoana ho re-hianatra ny fomba miteny hoe ny mahazatra ‘Salama. ‘ Manana chat afaka hihaona ankizivavy avy amin’ny firenena samy hafa: Amerika, Kanada, Eoropa, Aostralia. Noho izany dia tsy dia mila fotsiny mba hianatra ny hoe ‘Salama’ ary mila mianatra ny fomba hitsena ny ankizivavy avy amin’ny firenena samy hafa. Aoka ho sahy, ho mazoto, ary ianao dia ho afaka ny ho maro ny namana vaovao.
Avy eo dia hijanona miaraka amintsika. Fa ho mahalala fomba, hitondra tena tsara. Tsy tokony ho tsy mahalala fomba, tsy mila manompa ny hafa, tsy tokony misy ny fitenenan-dratsy sy ny politika. Hankafy fotsiny ny tsara, amim-pifaliana ny resaka, ny hatsikana ary ny filalaovana fitia. Amoron-dalana, ny asa fanompoana dia hentitra valo ambin’ny folo plus, ka ny ankizy mba handao ny efitrano
← Mihaona Ny Olona Ho Maimaim-Poana, Tsy Misy Fisoratana Anarana
Italiana Chat - Malalaka firesahana amin'ny efi-trano an-tserasera tsy misy fisoratana anarana, online chat →